एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ? - dautarimedia.com
त्यसैले महन्थ ठाकुरहरूलाई संसदमा जोगाउन सकिने, एमाले पनि फुटाउन सकिने गरी सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याइदियो भने मात्रै सहज हुने स्थिति छ । स्रोतका अनुसार, माधव समूह अहिले यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्दैछ ।
Previous: धादिङमा १० दिनदेखि हराइरहेकी २० वर्षीया युवती यस्तो अवस्थामा भेटिइन्
Next: स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न डा. केसीको माग